ሆሴዕ 12 NASV – Hosea 12 ASCB | Biblica
ሆሴዕ 12 NASV – Hosea 12 ASCB
1Efraim de mframa ayɛ aduane;
ɔdi apueeɛ mframa akyi daa
na ɔdi atorɔ yɛ akakabensɛm bebree.
2Awurade wɔ soboɔ de bɔ Yuda;
ɔbɛtwe Yakob aso, wɔ nʼakwan ho
na watua no ne nneyɛeɛ so ka.
3Ɔyafunu mu na ɔsɔɔ ne nua nantin;
ɔnyiniiɛ no, ɔne Onyankopɔn pepree so.
4Ɔne ɔbɔfoɔ tentameeɛ dii ne so nkonim;
ɔde nisuo srɛɛ ne nkyɛn adom.
Ɔhunuu no wɔ Bet-El
5Asafo Awurade Onyankopɔn,
6Ɛsɛ sɛ wo sane kɔ wo Onyankopɔn nkyɛn.
Tena ɔdɔ ne tenenee mu,
na twɛn wo Onyankopɔn daa.
7Ɔdwadini de nsisie nsania yɛ nʼadwuma;
nʼani gye nsisie ho.
“Meyɛ ɔdefoɔ; manya me ho.
Mʼahonya nyinaa mu wɔrenhunu
amumuyɛ biara wɔ me ho.”
9“Mene Awurade wo Onyankopɔn,
a meyii wo firii Misraim.
Mɛma woakɔtena ntomadan mu bio
sɛdeɛ na woyɛ wɔ wʼapontoɔ afahyɛ nna mu no.
10Mekasa kyerɛɛ adiyifoɔ,
memaa wɔn anisoadehunu bebree
na mefaa wɔn so kaa mmɛbusɛm.”
11Gilead yɛ otirimuɔdenfoɔ anaa?
Emu nnipa no yɛ ahuhufoɔ!
Wɔde anantwie bɔ afɔdeɛ wɔ Gilgal anaa?
Wɔn afɔrebukyia bɛyɛ te sɛ aboɔ
a wɔahɔre no sie wɔ asase a wɔafuntum soɔ.
12Yakob dwane kɔɔ Aramfoɔ asase so;
Israel someeɛ de nyaa yere,
ɔhwɛɛ nnwan de tua etiri nsa.
13Awurade nam odiyifoɔ so
yii Israel firii Misraim,
ɔnam odiyifoɔ so hwɛɛ no.
14Nanso, Efraim ahyɛ no abufuo yaayaaya;
nʼAwurade bɛma ne mogyahwiegu ho afɔdie ada ne so
na ɔbɛtua nʼanimtiabuo no so ka.
ASCB : Hosea 12